Geeri ka dhacday goobta lagu duubayo filimka Pari ee Anushka Sharma hogaamiye ka tahay - Hablaha Media Network
Geeri ka dhacday goobta lagu duubayo filimka Pari ee Anushka Sharma hogaamiye ka tahay
HMN:- Maalintii Talaadada ahayd waxaa geeriyooday mid ka mid ah qaybta farsamada korontada shaqsi qaabilsan kuwa ka shaqeenayo filimka Pari ee Anushka Sharma soo saare iyo hogaamiye kowaad ka tahay.
Habeenii Talaadada waxay koronto ku dhagtay farsamo yaqaan Sh. Shahabe Alam kaasi oo ku sugnaa goobta filimka Pari lagu duubayay, isla goobto ayuu ku geeriyooday madaama koronto awoodeeda sareyso ku dhaqtay!
Duubista filimka Pari waxay ka socotay keenta bamboo deegaanka Korolberia ee Kolkata ka tirsan, markii ay korontada ku dhagqtay Sh. Shahabe Alam asigoo miir heynin ayaa isbitaal meesha ka dhawaa loola cararay balse waxaa la sheegay inuu xili hore geeriyooday.
Clean Slate Films oo ah shirkada Anushka Sharma iska leedahay filimkaana maal galineesay waxaa madax u ah xidigtaan walaalkeed Karnesh Sharma oo cadeeyay geerida Sh. Shahabe Alam kana tacsiyeeyay sidoo kalena sheegay in ehelkiisa magdhow la siin doono inkastoo uu shil koronto ku geeriyooday.
Filimka Pari duubistiisa si ku meel gaar ah ayaa loo joojiyay qorshahana wuxuuna yahay in la daawado Febraayo 2018 ee sanadka dambe.